FILE: Zimbabwe’s President Robert Mugabe. Picture: GCIS
HARARE - President Robert Mugabe is insisting he remains Zimbabwe’s only legitimate ruler, an intelligence source said on Thursday, and is resisting mediation by a Catholic priest to allow the 93-year-old former guerrilla a graceful exit after a military coup.
The African Diaspora Forum is calling on Mugabe to ensure a peaceful and quick transition of power.
Spokesman Marc Gbaffou said: “Mugabe needs to leave Zimbabwe. I think he should be granted refugee status in one of the African countries and South Africa is well placed to host him because of its leadership role in the SADC.”
Additional reporting by EWN.